Iyo Apple Watch inoenderera ichitungamira kutengesa kwekupfeka maererano neIDC | Ndinobva mac
Uye zvinoita sekunge icharamba iri mutungamiri mumusika uyu kwemakore mashoma. Iyo Cupertino kambani yakatora chinguva isati yatanga smartwatch yayo pamusika, vazhinji vakati hazvingagare kwenguva yakareba uye vamwe vazhinji vakatofanotaura kuti ichave iri munzvimbo dzepamusoro dzekutengesa munguva pfupi. Rangarira izvo isu tine Apple Watch kubvira 2015 uye panguva ino yakazvisimbisa pachayo semutungamiri asina kupokana muchikamu ichi maererano nevanoongorora
Zvakanakisisa pane zvese, kambani inotungamirwa naTim Cook, haisati ichipa huwandu hwevatengesi kubva pavakatanga iyo yekutanga Series 0, asi kunyangwe zvakadaro, vaongorori vanoyambira kuti kutengesa zvigadzirwa kunosvika mamirioni 4.7 mayuniti mukati mekota yechipiri yegore rino uye saka tiri kutaura nezve 17% yemusika uripo. Apple hapana mubvunzo inotungamira uyu musika uye neiyo nyowani Series 4 iri kuzosvika munaGunyana 12 zvinoita sekunge inogona kutyora zvese zvinyorwa.
El yekutakura chati yakagadzirirwa muIDC kudzidza inoratidza mutsauko nemamwe mafemu ane mawadhi akangwara uye anopfeka, Apple ndiyo inotonga pamusika.
Apple inoenderera ichitungamira mumusika wema smartwatches mairi zvakare isu tine akawanda ekuenzanisa mamodheru akadhura kupfuura Apple Watch, semuenzaniso Xiaomi mhando. Chero zvazvingaitika, izvo zvinogona kujekeswa kubva pane zvese izvi ndezvekuti muzuva ravo vakarova nzvimbo nekuburitsa Apple Watch, kunonoka hongu, asi zvakauya kuzotonga nekutonga mune chikamu icho parizvino chisina vakwikwidzi.
LIwo matsva Apple Apple mamodheru ayo akagadzirira kuunzwa munaGunyana Ivo zvakare vane zvakakosha kuvandudzwa muchiratidziro zvine mashoma mafuremu uye akakura, iyo bhatani bhatani inova capacitive, korona, kuvandudzika mukuzvimiririra uye inotopa iko kunzwa kwekuti ivo vadzora hukobvu (kana tikatarisa iyo yakasvinwa pikicha) saka izvo ndeyechokwadi kuve mumwe mutengesi wakanakisa kwemwedzi mishoma inotevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo Apple Watch inoramba ichitungamira kutengesa kweanopfeka zvinoenderana neIDC
Wedzera mutsetse mutema kune chero mufananidzo zviri nyore neBlack Out
Iyo yazvino Skype yekuvandudza inotibvumidza kunyora mafoni